Lalao telo hankafizana an'ity tetezana ity amin'ny orinasa | Vaovao IPhone
Androany dia toa zoma, saingy tsy izany. Andro tsara kokoa noho izy io satria mialoha ny faran'ny herinandro indroa, tetezana lava misy efatra andro ny alahady ho avy izao dia hieritreritra isika fa lasa fohy loatra. Iza koa ary iza no tsy hanana ny drafitra efa nomaniny (ny ahy dia ny hiala amin'ny fiainako mifandray), fa na inona na inona izy ireo, azonao atao ny manankarena azy ireo amin'ny lalao izay entiko aminao anio.
Na handany ny faran'ny herinandro ianao, miaraka amin'ny namanao na amin'ny zanakao, anio dia mitondra lalao telo mahafinaritra ho anao aho hampitomboana ny fahafinaretana. Ary, raha maika ianao, dia mbola afaka manararaotra ny tolotra ka mahazo azy ireo amin'ny vidiny lafo, ary na dia maimaim-poana aza.
2 Biby Lily Farm
Manomboka amin'ny "LIMBO" izahay, iray amin'ireo lalao indie tsara indrindra navoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy, noderain'ny mpitsikera sy ny mpampiasa; lalao mahatsiravina izay ahitàna ilay tena mpilalao sarimihetsika ao Limbo mitady ny rahavavinao eo afovoan'ny tontolo manjombona, atmosfera sy mozika mahatsikaiky izay mampitombo ny tahotrao.
LIMBO dia manana vidiny mahazatra 4,49 € ary raha maika ianao dia afaka mahazo izany amin'ny antsasany. Raha tsy izany dia mbola lalao soso-kevitra tena tsara izy io, saingy tsy mety amin'ny fo saro-pady.
Biby Lily Farm
Ary ho an'ireo izay manan-janaka kely any an-trano dia mitondra anao «Lily Farm Animal», a lalao mahafinaritra, fialamboly ary fanabeazana natao ho an'ny ankizy hatramin'ny faha-5 taonany noho izany dia hahalala momba ny biby, voankazo, legioma, olona, ​​fiara, toeram-piompiana sy maro hafa izy ireo nefa tsy mijanona miala voly kely.
"Lily Farm Animal" dia misy vidiny mahazatra 3,49 € ary raha maika ianao dia afaka mahazo maimaimpoana.
Lily Farm Animal Premium sticker€ 2,99
Ary mifarana amin'ny «MovieSpirit» isika, izay tsy tena lalao, fa mahafinaritra mpamoaka horonantsary matihanina ho an'ny iPhone sy iPad ahafahanao manova ny sarinao manokana, ao anatin'izany ny feon-kira sy ny vokany, miaraka amin'ireo horonantsary amin'ity tetezana ity.
"MovieSpirit" dia manana vidiny mahazatra € 10,99 ary raha maika ianao dia afaka mahazo maimaimpoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao telo hankafizana an'ity tetezana ity miaraka aminao
Apple dia mitandrina amin'ny tontolo iainana na dia ao anaty fonosiny aza